Jamaika : Manaitra Loatra Ny Filàna Ka Tsy Fandefa Amin’ny Onjampeo Ireo Hira Dancehall · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2018 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, English
Miala any indray ao Jamaika ilay resabe tsy misy fitsaharany, ilay milaza hoe tsy dia mety loatra ho alefa amin'ny onjampeo ny tononkira sasantsasany. Nolazain'ny Kaomity jamaikàna miandraikitra ny haino vaky jery [ang] tamin'ny fomba ofisialy ny fandraràna ireo hira rehetra heverina fa misy tonony mivantambantana loatra tsy ho alefa amin'ny onjampeo [ang], taorian'ny saritaka nitranga taorian'ny nivoahan'ilay hiran'i Vybz Kartel sy Spice [ ang] tsy ela akory izay. Ny lohatenin'ilay hira hoe “Rampin’ Shop” (tenin-jatovo jamaikàna entina milaza ny firaisana ara-nofo) dia miavaka noho ireo tonony mivantambantana loatra. Mihatra nanomboka ny 6 Febroary 2009 io fandraràna io ary mahakasika ireo hira rehetra manindrahindra ny “daggering” [ang] (firaisana ara-nofo mahery setra na dihy miendrika fanairana filàna), ary hatramin'ireo hira izay nasiana fanovàna ara-teknika mba hanafenana ireo “fahavetavetàna” sy votoaty hafa momba ny firaisana.
Ilay vehivavy jamaikàna, mpanoratra bilaogy, Girl with a Purpose mihevitra [ang] hoe na nihena tokoa aza ny fandefasana ireo hira manana votoaty somary veta nalefa “ho teo amin'ny 50€ teo ….tao amin'ny onjampeo sy ny fahitalavitra”, dia mifatratra any amin'ireo olondehbe ao amin'ny fiarahamonina ny ankamaroan'ny andraikitra, ary indrindra fa ny ray aman-dreny izay tokony ho mpanivana ny tenany aloha ary mahatsapa fa :
ratsy ny mampilòna ny ankizy sy tanora aminà mozika manana votoaty mivantambantana sy vetaveta izay manefy azy aloha loatra ho amin'ny resaka firaisana ara-nofo sy ny fihetsika feno herisetra.
Ankoatry ny dancehall, eny anivon'ny adihevitra ihany koa ireo karazana mozika hafa toy ny soca, calypso, hip hop, ary ny rap…), indrindra fa amin'izao vanimpotoanan'ny karnivaly (fetibe) ao Jamaika izao, izay ny soca avy any Trinité-sy-Tobago no mitàna ny lohalaharana ao amin'ilay nosy. Ao anaty vanimpotoana izay iampangàn'ireo jamaikàna artista ny fihatraràna ivelantsihy amin'ilay fandraràna ny dancehall fotsiny, ilay jamaikàna bilaogera MadBull [ang] monina any amin'ireo nosy Caïmanes, kosa milaza ny fanohanany tanteraka an'ilay fandraràna [ang] ary ampiany fa tokony ho ampiharina amin'ireo karazana mozika rehetra mety ho alefa amin'ny onjampeo izy io. Ao amin'ny bilaoginy, hoy izy:
Inona no mba atao amin'ny soca, ny hip-hop sy ireo hafa? Tsy olana izay karazany! Rehefa tsy mety ny tonony, tokony horaràna! Izay no hevitro momba io resaka io!
Ilay jamaikàna bilaogera tsy mitsitsy teny, Agostinho, dia nandefa tao amin'ny biloaginy ny taratasy iray nalefany ho an'ny toniandahatsoratr'ireo gazety isankarazany ao an-toerana [ang] izay nanitrikitrihany ny filàn'ny dancehall maka endrika vaovao. Na dia ekeny aza ny maha-zavadehibe ny dancehall ao anatin'ny fiarahamonina jamaikàna sy ao anatin'ny kolontsain'ny vahoaka, heverin'ilay bilaogera fa manana adidy io mozika io amin'ny fanefena ny endriny vaovao, mba ho soa ho an'ny fiarahamonina izay niteraka azy.
Tsy dia mendrika loatra eo anatrehan'ny fomba fiasa, indrindra fa hita ny dindony tsy mitsaha-mitombo amin'izao fotoana izao, ary indrindra ho fanaporofoana ny hamaroana sy ny fahaizamamorona ananany manokana. Fantatsika tsara, nihoaran'ity farany ny endrika sasantsasany amin'ny fibahanan'ny resaka veta sy herisetra ao anatin'ny saina.. Ny hoe maro ireo mpamokatra sy ireo artista no tsy mitsahatra miaro ireny fihoaram-pefy ireny, amin'ny fanilihana izany ho anjaran'ny tsy fahampian'ny fanabeazana, manompa ny fahasamihafàna ara-tsaina sy ny halalin'ny resaka taokanto ao anatin'ny indostria sy ny kolontsaina
Stunner's Afflictions koa manolotra ny fijeriny momba io fandraràna io [ang]. Tohanany feno ilay fanapahankevitry ny Kaomisionan'ny Fampielezampeo saingy tsindriany mafy ny hoe efa ela izany no nandrasana:
Anjaran-dry zareo ny mampanaja ireo voalazan'ny Fepetra Fandrindràna ny Haino Vaky Jery, amin'ny resaka fandefasana zavatra ho an'ny daholobe amin'ny onjampeo. Koa naninona izy ireo no niandry ny fanesorana ilay fiarovana sy ny tsindry avy amin'ny vahoaka vao niditra tamin'io fandraràna io? Inona no efa nataony ary inona no ataony ankehitriny, ho ahy, mandoa hetra vokatry ny hatsembohan'ny tavako? Tokony hamoritra ny tanan'akanjony ny Kaomisiona misahana ny Fandefasana Onjampeo, toy izay voaporofon'ity raharaha ity.
Ao amin'ny bilaoginy, tanjon'ny lahatsoratra manaraka etoana momba ny Fetin'ny Mpifankatia [ang] ny hampahatsiahy ny mpamaky ny endrika mavesadanjan'ilay resaka :
Tsy voatery ho azo helohina daholo akory ireo hirantsika Dancehall/Reggae. Anatin'ireo nalefa tamin'ny onjampeontsika, misy mbola lafatra tsara mihitsy ny sasany.
Tohizany amin'ny fanolorana ohatranà lahatsarin-kira iray: “Love Reigns” (Manjaka ny fitiavana) hirain'i Tarrus Riley sy Bugle, vehivavy jamaikàna vao nipongatra [ang].
Hatramin'ny nandraràna ny fandefasana ho an'ny daholobe ireo hira mivantambantana, re etsy sy eroa ireo antso mba hamokaran'ny tontolo artistika jamaikàna taokanto mitondra fanabeazana kokoa. Ny gazetiboky YardFlex, izay milaza ny tenany ho toy ny “Gazetiboky Faratampony amin'ny resaka Alavoly”, dia vao haingana no niresaka [ang] an'i Tychicus, mpitsabo nentindrazana sy nanandra-tena ho mpaminany, izay nitarika fihetsiketsehana samirery hanoherana ny “daggering” [ang]. Nanomboka tamin'ny fandraràna, sosokeviny ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy ny mba handihy amin'ny fomba tsy azo kianina, izay ambarany fa “hevitra avy amin'Andriamanitra”.
Vao manomboka ity adihevitra ity, satria vao folo andro monja izay no nivoahan'ilay fandraràna ary mbola andrasana ny fampiharana feno azy io sy izay vokany. Miray feo daholo mankasitraka ilay fandraràna ireo jamaikàna bilaogera ary mahita zy iny ho fotoana iray fanararaotra ho an'ireo artista mba hisongadinana sy hanehoana amin'ny vahoaka ny fahaizan'izy ireo mamorona .